Asylum Help Somali / Adeegyadeena
Asylum Support Application UK
Khadka Caawinta Magangalyada (Asylum Helpline)
Talo Taageerida codsiyada
Talo ku baxsho luqadaada meel walba ee dalka UK
Asylum Advice UK
Asylum Help wuxuu magangalyo-doonka wayn iyo tiirsanayaashooda ku siiya luqad ay garan karaan idil ahaan dalka UK talo sir ah iyo aan eex leheen.
Adeeggeena Asylum Advice UK wuxuu baxshaa macluumaad iyo talo khuseeya hab-socodka magangalyada ee dalka UK.
Kooxdeena Asylum Advice UK, oo joogo meelo kala duwan ee UK, waxay talo ka bixin karaan arrimahaan:
Sida magangalyo loo codsado
Helidda xannaano caafimaad
Arrimo kale ee khuseeya magangalyada
Sidee kuu caawin karnaa?
Haddii aad rabtid inaad ogaato wax ka badan ee khuseeya hab-socodka magangalyada UK ama taageeridda aad xaq u leedahay oo ku qoran luqado kala duwan ka eeg bogga internetka ku qoran luqado kale duwan ee Talada Magangalyada (Asylum Advice) halkaan.
Waxaan talo waji ka waji ah siinnaa magangalyo-doonka jooga degaanada koowaad.
Waxaan talo luqaddaada ku bixinnaa telefoonka meel walba ee dalka UK ayadoo loo maraayo Asylum Advice Helpline (Khadkeena Talo-siinta Magangalyada) (Talo-siin). Lambarada lagala xiriiro waxay ku qoran yihiin hoos.
Waxaan telefoonka ama shakhsi ahaan kugu toosin karnaa adeegyo waxtar leh ee ku yaalo xaafaddaada. Waxaan ku siin karnaa adeeg booqasho leh markii loo baahdo (Loogu talagalay macmiilada baylaha ah, warbixinada koox ahaan loo baxsho ama markii codsi gaar ah la sameeyo)
Fadlan ogow suurtogal ma ahan inaan looyar kuu noqonno, laakiin waxaan kugu toosin karnaa ururyo xaafadda ku yaalo ee arrimahaas kugu caawin karo.
Fadlan ogow inkastoo aan awoodno inaan talo ka bixinno waxyaabaha aad xaq u leedahay, kuma siin karno talo sharciyeed ama looyar kuuma noqon karno. Haddii aan ku caawin karin, waxaan ku siin doonnaa liiska looyaro takhasuusan.
Waxyaabaha muhiim u ah Migrant Help
Si aad u ogaato wax ka badan ee khuseeya Migrant Help fadlan halkaan guuji
Badbaadin waxaan aaminsanahay in qof walba u xaq u leeyahay inuu dareemo ammaan iyo xuquuqyadooda aadanaha loo ilaayo.
Kala duwanaan waxaan ixtiraamnaa iyo dabaaldegnaa waayo-aragnimada shakhsiyadeed ee qof walba iyo waxaan hubinnaa in isku dhaafida uu ku jiro bartamaha hawsheena
Sinnaanta waxaan aaminsanahay daacdnimada iyo u sinnaanta fursadaha. Kani wuxuu ku jiraa bartamaha wax walba aan sameyno.
Iskaashiga waxaa inaga go’an inaan si iskaashi ah la shaqeyno dhammaan kuwa nagu caawiyo inaan qancino aragtideena dheer.
Wax soo saarida cusub waxaa inaga go’an inaan la qabsanno habab shaqo cusub ee baxsho adeegyo waxtar leh ka badan.
Heerka ugu sarreeyo Waxaan heegan u nahay bixinta adeegyada tayada ugu fiican iyo inaan gaarno heerka ugu sareeyo ee xannaanada macmiilka
Asylum Help wuxuu diyaar u yahay inuu ku siiyo macluumaad bilaash ah iyo taageerid si lagugu caawiyo hab-socodka magangalyada.
Si aad u booqato Xarunta Iloyinka (Resource Centre) halkaan guuji